I-China 55 HRC Carbide 2 Flute Standard Length Ball Impumlo Ukuphela kweemile manufacturers kunye nabathengisi | Mingtaishun
I-55 ye-HRC Carbide 2 Flute standard Ubude beempumlo zokuphela kweMill
Uyilo olungqini-mbini luphucula ukuqina kunye nokugqiba umphezulu ngokugqibeleleyo.Ukusika umda ngaphezulu kweziko kunciphisa ukumelana nokusika. Ubungakanani obuphezulu be-junk slot bokususa i-chip kunye nokwandisa ukusebenza kakuhle koomatshini. Uyilo 2flutes kulungile ukuba ukususwa chip, kulula ukuba nkqo processing feed, esisetyenziswa ngokubanzi slot, iprofayili, kunye umngxuma processing.
I-MTS-R1.25 * 5 * 6 * 50-2F 2.5 5 6 50 2 1
I-MTS-R1.5 * 6 * 6 * 50-2F 3 6 6 50 2 1
I-MTS-R1.75 * 7 * 6 * 50-2F 3.5 7 6 50 2 1
I-MTS-R2.25 * 9 * 6 * 50-2F 4.5 9 6 50 2 1
Izixhobo ze-1.Advanced kunye nezixhobo zokuvavanya: iAustralia iAnca, iJamani iWalter kunye neJamani izixhobo zokuvavanya izixhobo
2.Low MOQ: 5pcs imfuyo 10pcs ulwenziwo.
3.OEM & ODM yamkelwe: Nawuphi na uyilo accoding kwimizobo yakho okanye iisampulu.
Inkonzo 4.Good: Siye saseka ubudlelwane lwentsebenziswano ixesha elide kunye nabathengi bethu
5.Stock: stock enkulu ekupheleni lokusila standard.
Umgangatho we-6 kunye nexabiso elifanelekileyo: Umgangatho ophezulu kunye namaxabiso afanelekileyo. Isaphulelo esahlukileyo ngokusekwe kubungakanani
Amava 7.Rich: Singumvelisi oneminyaka engaphezu kwe-10 kule nkalo.
I-8,100% ekuhanjisweni kwexesha: Sinesitokhwe esikhulu, ke ngoko sinokulungiselela ukuthunyelwa ngokukhawuleza kuwe.
Ukuchaneka okuphezulu komgangatho wokuvelisa we-CNC: Sinomgca wokuvelisa ogqityiweyo kunye ogqibeleleyo we-CNC.
Ukwaneliseka kwabaThengi kuhlala kukufuna kwethu, ukudala ixabiso kubathengi kuhlala kungumsebenzi wethu, ubudlelwane beshishini olunenzuzo ixesha elide yinto esiyenzayo. Siliqabane elithembekileyo kuwe e-China. Ewe ezinye iinkonzo, ezinje ngokubonisana, zinokunikezelwa nazo.
Unokusazisa umbono wakho wokuphuhlisa uyilo oluyingqayizivele kwimodeli yakho yokuthintela iindawo ezininzi ezifanayo kwimarike! Siza kubonelela ngeyona nkonzo yethu ilungileyo ukwanelisa zonke iimfuno zakho! Nceda unxibelelane nathi kwangoko!
Egqithileyo I-55 HRC Carbide 2 Flute Micro Isiphelo seMill
Okulandelayo: I-55 yeHRC khabhide 2 ubude bemigangatho yebhola yepumlo yokuphela kweealum